Dawladda Puntland oo dhaleecaysay afduubka shaqaalaha hay?adda DDG. – Radio Daljir
Dawladda Puntland oo dhaleecaysay afduubka shaqaalaha hay?adda DDG.
Galkacyo, Oct 26 ? Dawladda Puntland ayaa cambaaraysay afduubkii loo gaystay labo shaqaale shisheeye ah oo u shaqanayey hay?adda DDG iyo qof Soomaali ah, kuwaasi oo shalay galinkii dambe laga afduubtay magaalada Galkacyo gaar ahaanna xaafadda Wadajir ee uu ka taliyo maamulka Galmudug.
Wasiirka amniga Puntland Khaliif Ciise Mudan, oo maanta waraysi siiyey Radio Daljir ayaa sheegay in ay aad uga xunyihiin, ayna dhaleecaynayeen falka lagu afduubtay labadaan shaqaale ee ajaaniibta ah oo u kala dhashay dalalka Maraykanka iyo Denmark kuwaasi oo u shaqanayey hay?adda baarista iyo burburinta waxyaabaha qarxa ee Danish Demining Group ?DDG?.
Wasiirka amniga Puntland, waxaa uu sheegay falkaasi in uu ahaa mid aad u fool xun, meel-ka-dhacana ku ah sharafta qofka bani?aadanka ah, waxaana uu intaasi ku daray in ay nasiib-darro tahay afduubashada shaqaalaha u adeegaya bulshada.
Md. Khaliif Ciise Mudan, waxaa dhinaca kale uu sheegay tani in ay feejignaan ku abuurayso ciidamada nabadgalyada Puntland gaar ahaanna kuwa u xilsaaran illaalinta hay?adaha iyo shaqaalaha shisheeyaha ah kuwaasi oo lagu magacaabo SPU.
Dhinaca kale warar is-khilaafsan ayaa ka soo baxaya halka loola jahaystay shaqaalaha la afduubtay iyo goobta lagu hayo xilligaan, waxaan socda dadaallo xooggan oo uu ku hawllan yahay maamulka Galmudug oo lagu baadi-goobayo dadka la afduubtay.